Macluumaadka Degmada Ramsey oo af Soomaali ku qoran | Ramsey County
Ilaalinta iyo Khayraadka Qalalaasaha
Caawinta iyo taageero
Caafimaadka iyo saxada
Doorashooyinka iyo codeynta
Qiimeynta hantida iyo canshuuraha
Dibu-warshadayn iyo Qashinka
Jidadka iyo gaadiidka
Maktabadda Degmada Ramsey
Jardiinooyinka iyo madadaalada
Badbaadada iyo sharciga
Ku saabsan Degmada Ramsey
Ku soo dhawow macluumaadka Degmada Ramsey oo Soomaali ku qoran.
Bogagga hoose si hufan ayaa loogu tarjumay Soomaali laakiin waxa laga yaabaa inay kugu xiraan bogag kale oo macluumaadka barnaamijka ah oo Ingiriisi ku qoran. Waxa loo adeegsan karaa Google ama Bing Translator si ay otomaatig ahaan bog kasta loo tarjumo.
Goor kasta waxaan ka shaqaynaa in lagu tarjumo nuxurkii dheeraad ah af Soomaali.
Ramsey County waxay kaloo bixisaa adeegyada turjubaanka telefoonka ee gaaraya illaa 170 luqadood. Adeegyada waxaa lagu helayaa ayadoo la waco 651-266-8500 – miiska so dhowaynta ayaa kaala shaqayn doontaa sida uu/ay kuugu xiri lahayd shaqaalaha laan kasta ee degmada iyo turjubaan ku caawiya.
Adeegyada iyo barnaamijyada
Ilaha ilaalinta iyo qalalaasaha
Caawinta iyo taageero - cunto, kiro, xanaanada ilmaha, guryeyn, qoysas, caafimaadka dhimirka, shaqaalayn, askari hawlgab
Jidadka iyo madadaalada
Shaqada iyo fursadaha iskaa-wax-uqabsada
Xarumaha Adeegga Degmada Ramsey wuxuu ku xiraa degganayaasha adeegyo badan oo kaladuwan oo degmada ah oo ay ku jiraan caawinta qof ahaanta, fursadda ku saleysan saldhigyada shaqada kumbuyuutarka iyo sanduuqyada lagu rida dokumintiyada illaalsan.
Goobaha iyo saacadaha